ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ ဘယ်အချက်တွေက ပျော့ကွက်တွေ၊ အခက်အခဲတွေ ရှိနိုင်သလဲဆိုတာ သိ အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ ဒီလိုအခက်အခဲတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရေရှည်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အကျိုး ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဟားဗတ်စီးပွားရေးပညာသင်ကျောင်း (HBS) ရဲ့ ပါမောက္ခ James Sebenius ဟာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ အထူးလေ...
Visits : 3049
၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Jeffrey Preston "Jeff Bezos ဟာ အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နည်းပညာနဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Amazon.com ရဲ့ တည်ထောင်သူနဲ့ CEO အဖြစ်သာမက Online နဲ့ အစပိုင်းမှာ စာအုပ်တွေကိုရောင်းပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပစ္စည်းပေါင်းစုံကိုရောင်းတဲ့ ကုန်သည်တစ်ယော...
ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ပြီး သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကို လွယ်မယ်ထင်ပါသလား။ မလွယ်ပေမယ့်ဒီလိုနည်းနဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူတွေ တကယ်ရှိပါတယ်။သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန် သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီစည်းမျဉ်းတွေက ဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆို သင့်ကိုအောင်မြင်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာမှာ သေချာပါတယ်။၁။ စိန်ခေါ်ပြီ...
Visits : 3269
၁။ အလုပ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်အောင်လုပ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဘဝရှင်သန်ချိန်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဟာ အလုပ် လုပ်နေရပြီး အိပ်ချိန်မဟုတ်ဘဲ နိုးနေတဲ့အချိန်တွေရဲ့ တစ်ဝက်က အလုပ်လုပ်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ကလူတွေနဲ့သေးငယ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တောင် ဒါကလူတွေ ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေရုံသာမ ကဘဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာပိုပြီးပျော်ရွှင်စ...
Visits : 3487
STARTUP တွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုထူထောင်တဲ့ အခါမှာ
ဘယ်လုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်လုပ် သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို ကူညီပေးနိုင်ဖို့&nbsp;အရည်အချင်းရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ ဝန်ထမ်းကိုခန့်ထားနိုင်ဖို့ဆိုတာ&nbsp;ထင်ထားတာထက်ပိုပြီး ခက်ခဲပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ လိုအပ်တဲ့&nbsp;ဝန်ထမ်းကို ခန့်ထားနိုင်ဖို့အတွက် သူ့ရဲ့လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံတွေ၊&nbsp;ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအချက်အလက...
Visits : 3192
(၁) မန်နေဂျာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် မကြိုးစားခြင်းCEO တွေ ဘာလို့ လစာတွေ မယုံနိုင်လောက်ေအာင် ကောင်းရတယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားဖူးပါသလား၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ သူတို့သွားစေချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို လူပေါင်းများစွာရဲ့ အင်အားတွေကိုသုံးကာ ရရှိအောင် လုပ်နိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီလိုလုပ်ဖို့ အရမ်းအားထုတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အေးဆေးသက်သာစွာနဲ့ လုပ်နေတာဖြစ်ပ...
49 - 54 of ( 154 ) records